Su'aal Emirates Fleet A380
1 sano 5 bilood ka hor #761 by Aidablu1508
Hada, waxaan isku dayayaa inaan ku daro dabeecadaha Emirates Fleet ee A380, laakiin mawaadiicda ma muujinayso ama VC ma shaqeynayo, maxaan sameeynayaa qalad, miyaad i caawin kartaa ..
1 sano 5 bilood ka hor #762 by Dariussssss
Wax la mid ah ayaa igu dhacay. Waxay leedahay wax ka qabashada muuqaalka, sababtoo ah waxaad ogtahay in ay jiraan laba version 841 iyo 861, mid leh RR iyo kuwa kale oo leh matoorada EA GP2700, sidaas darteed waa inaad been u sheegtaa, waa inaad sameysaa diyaaradda u maleyneysaa in aad rakibtid waa mid sax ah. Isticmaal koodka Maqaarka maqaarka, si aad ugu darsato noocyada kale ee cuntada. Waa inay shaqeeyaan.
1 sano 5 bilood ka hor #763 by Aidablu1508
waad ku mahadsan tahay, badanaa, shaqeynaysay, waxaan bilaabay inaan soo saaro timaha iyo ciddiyaha si aan u helo tan shaqadan
mar kale waad ku mahadsan tahay
1 sano 5 bilood ka hor #780 by jck003
iskuday iyo dib u soo dejiso
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.281